एनएमबी बैंकदेखि सर्वसाधारण वाक्क ! सर्भिस ‘झुर’ भन्दै विरोध | सु-सुचित नेपालको चित्र
सामाजिक सञ्जालमा फैलिदैछन् ‘कालो स्टाटसहरु’
एनएमबी बैंकले सर्वसाधारणलाई विभिन्न बहानामा दुःख दिने गरेको पाइएको छ । बैंकले ग्राहकलाई सेवा भन्दा पनि धेरै झण्झट दिन थाले पछि सर्वसाधारणहरुको विरोधका स्वरहरु सुन्न थालिएको छ ।
बैंकको सेवा झुर भएको भन्दै सावधान रहन समेत सर्वसाधारणहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत आग्रह गरेका छन् । नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा एक व्यक्तिले कालो ब्याकराउण्डमा स्टाटस लेखेर एनएमबी बैंकको सेवा झुर भएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् ।
उनले विरोध अंकित कालो ब्याकग्राउण्डमा एनएमबि बैंकमा खाता भएका र यस बैंकको एटिएम प्रयोगकर्ताहरुलाई सचेत रहन आग्रह समेत गरेका छन् । उनले आफ्नो स्टाटसको शुरुमा नै ‘सावधान’ भन्ने दुईवटा शब्द प्रयोग गरेका छन् । उनले फेसबुमा लेखका छन्– ‘सावधान ! सावधान ! एनएमबि बैंकमा खाता हुनेहरु १ गते र २ गते बेइज्जत हुनु पर्ला है ।’
उनको यो लेखाइबाट एनएमबि बैंकको सेवाको विषयमा प्रश्न उठाइएको छ । भनेका बेला आफ्नै खातामा भएको रकम हुनेले समेत निकाल्न नसक्ने र बेइज्जति हुनु पर्ला भन्ने उनको स्टाटसको संकेत छ । उनी एउटा सर्वसाधारणको प्रतिनिधिपात्र मात्रै हुन् ।
एनएमबि बैंकको सेवा राम्रो नभएकै कारण सर्वसाधारणहरुले हैरानी पाउने घटनाहरु थुप्रै छन् । अनलाइनपानासँग बैंकको सेवाबारे गुनासो राख्दै केहि व्यक्तिहरु समेत सम्पर्कमा आएका छन् । हामी बैंकका कारणले सर्वसाधारणले पाउने गरेका सास्तीहरु क्रमशः प्रकाशन गर्दै जानेछौं ।